Ngombulelo kumaso eglasi afakelwe kwizinto zokumakisha, ubuhlalu beglasi bubonakalisa izibane zangaphambili zesithuthi kumqhubi, esenza njengesipili, esikhokelela kwisiphumo "sokukhanya" komtya. Esi sisigqibo esifanelekileyo kunye nokhuseleko ezindleleni.
Iibhola zeglasi ziyinxalenye ebalulekileyo yeenkqubo zokukhusela izithuthi. Endaweni yokusasaza ukukhanya, ukukhanya kuphindisiwe kwiintsimbi, kuvumela ukuba kuboniswe yindlela yokumakisha ibuyela kumqhubi.
Ukubonakalisa ubuhlalu beglasi kunokuphucula ukubonakalisa kwakhona ipropathi yomgca wokumakisha wendlela. Ukuqhuba ebusuku, izibane zangaphambili zikhanya emgceni wokumakisha wendlela kunye namaso eglasi, ukukhanya kwezibane zangaphambili kubonakala ngasemva ngokufanayo. ke umqhubi uyayibona indlela ngaphambili, kwaye uqhuba ngokukhuselekileyo ebusuku.
Ubungqina beglasi egumbini lokumakishwa kwendlela
Ikhutshiwe inokwenziwa ukusuka kwi-50um-1180um, ngokusekwe kwiimfuno zabaxumi.
1.7nd Iibhola zeglasi zokumakishwa kwendlela
1.7nd Ukubonakalisa ubuhlalu beglasi kunokuphucula kakhulu ipropathi yokubonakalisa kwakhona yomgca wokumakisha wendlela. Ukuqhuba ebusuku, izibane zangaphambili zikhanya emgceni wokumakisha wendlela kunye namaso eglasi, ukukhanya kwezibane zangaphambili kubonakala ngasemva ngokufanayo. ke umqhubi uyayibona indlela ngaphambili, kwaye uqhuba ngokukhuselekileyo ebusuku.